ओप्पो ए १६के ३ जिबी ¥याम +३२ जिबी रोम र ४ जिबी ¥याम + ६४ जिबी रोमका साथ अब बजारमा उपलब्ध - Aarthik Sanjal
ओप्पो ए १६के ३ जिबी ¥याम +३२ जिबी रोम र ४ जिबी ¥याम + ६४ जिबी रोमका साथ अब बजारमा उपलब्ध
थ्री डी स्लिक डिजाईन, एच् डी + आई–केयर स्क्रिन र ४२३० एमएएच्् लङ्ग–लास्टिङ ब्याट्री
काठमाडौँ, नेपाल– ओप्पो ए १६के ३ जिबी ¥याम + ३२ जिबी रोम र ४ जिबी ¥याम + ६४ जिबी रोम लार्ज मेमोरी र स्टोरेजका साथ अब बजारमा उपलब्ध छ । ३ जिबी भेरियन्टको मूल्य मात्र रु. १५,९९०/– र ४ जिबी भेरियन्टको मूल्य १७,९९०/– कायम गरिएको छ ।
पछिल्ला केही बर्षहरुमा, प्रविधिको विकासले विश्व र मानव जीवनमा नवीनतम परिवर्तन ल्याइरहेको छ । अग्रणी प्रविधिहरुका साथ ओप्पो सबैका मागहरु पूरा गर्न प्रतिबद्व छ ।
जीवन, सपना र सद्गुणहरु जस्ता सामाजिक जिम्मेवारीहरु पूरा गर्छौं र धेरै मानिसरु र उद्योगहरुलाई लाभ पु¥याउँछौ । यो दिगो विकासको भावना हो जसलाई सबैसँग मिलेर समाजलाई अगाडी बढाईरहेको छौ । ।
ओप्पोले थ्री डी स्लीक डिजाइन, उत्पादन प्रक्रिया, स्टाईलिश र टिकाउ उपकरण उत्पादन गर्दै ओप्पो ए १६के को १६.६६ से.मी. ६.५२ एच् डी वाटरड्रप स्क्रिनलाई थप परिमार्जित र १६००x७२० डिस्प्लेको साथ अपग्रेड गरिएको छ, जहाँ चार गोलाकार कुनाहरुलाई पोइन्ट कर्नरहरुका रुपमा लिईएको छ । यो ४२३० एमएएच् लामो समयसम्म चल्ने ब्याट्रीले सुसज्जित छ ।
यो फोनको रियर क्यामेरामा कस्मोपोलिटन, ऐस्ट्रल र ड्याजल सहित तीन नयाँ नाईट फिल्टर सुविधा थप गरिएको छ । यी सबै प्रयोगकर्ताहरुलाई सुन्दर, व्यावसायिक शटहरु खिच्न मद्दत गर्न डिजाइन गरिएको हो । यसमा ५ x डिजिटलजुमको साथ १३ एमपी फ्रन्ट क्यामेरा छ ।
यसले प्रयोगकर्ताहरुलाई उत्पादनशील र मनोरञ्जन गर्न आवश्यक परेको बेला थप क्षमता गर्दछ । थप रुपमा, ए १६ के मा भिडियो प्यारामिटरहरु, भिडियो फिल्टर शैलीहरु Soloop सम्पादन सुविधाहरु पनि पाईन्छ, यसमा सफ्ट, आफ्टरनुन्, लाईट फिल्म, रिच, प्योर, प्लेन, नोस्टाल्जिक, वेस्टर्न, ट्वाइलाइट र मोनोक्रोम जस्ता १० फिल्टरहरु समावेश छन् । Soloop सम्पादनमा संगीत, सम्पादन, उपशीर्षक र फिल्टरहरु पहिचान गर्न सकिन्छ ।
यस बाहेक, यसले आफ्नो एआई ईन्जिन मार्फत दृश्यको चमक र रङ्ग पुर्नस्थापना गर्दछ । फोटो थप जीवन्त र प्राकृतिक देखाउन ईमेज र त्यसपछि ईमेज रङ्गहरु पुन: निर्माण गर्न पिक्सेल स्तरको कलर म्यापिङ एल्गोरिथम प्रयोग गरिएको छ ।
यहाँ ब्याक क्यामेराको लागि तीनवटा नयाँ नाईट फिल्टरहरु छन्: कस्मोपोलिटन, ऐस्ट्रल र ड्याजल यी सबै प्रयोगकर्ताहरुलाई सुन्दर, व्यावसायिक शटहरु खिच्न मद्दत गर्न डिजाइन गरिएको हो ।
ओप्पो A16K कोे मुनलाईट डिस्प्ले, सनलाईट डिस्प्ले र एआई स्मार्ट ब्याकलाइर्टले दिनभरी प्रयोगकर्ताको आँखाको ख्याल राख्छ । स्क्रिन पुल डाउन गरी एप आईकनहरु छेउमा राख्न सक्दछ र उक्त आइकनहरु छोडी एप खोल्न सक्दछ ।
साथै, सामाजिक मिडिया ब्राउज चलाउँदा वा गेम खेल्दा ल्याग–फ्रि स्मुथनेसको लागि सिस्टम बुस्टर सफ्टवेयर अप्टिमाइजर, अक्टा–कोर चिपका साथै १TB सम्म स्टोरेज बढाउन सकिन्छ ।
९ असार २०७९, बिहीवार १८:०४ बजे प्रकाशित
एनएमबि बैंकका ग्रहकहरुलाई भाटभटेनी, धनगढीमा किनमेल गर्दा फाइदै फाइदा
टेलिकमको इन्टरनेट इन्ट्रानेटको महसुल घटयो
निजी क्षेत्रको सहभागितामा आइटी पार्क बनाउन परिसंघको आग्रह
नेपाल बैंकको मोबाईल बैंकिङ एप चलाउँदा डाटा शुल्क नलाग्ने
रियलमीले नेपालमा सबैभन्दा छिटो चार्ज हुने स्मार्टफोन रियलमी जिटी नियो ३ को साथमा प्रिमियम फ्लागिशिप रियलमी जिटी २ प्रो आगामी असार ३ मा ल्याउने तयारी
ओप्पोको ए–सिरीज अन्तर्गतको पछिल्लो स्मार्टफोन नेपालमा सार्वजनिक
नेपाली बजारमा नम्बर १ स्मार्टफोन बन्दै रेड्मी नोट ११
हेर्दाहेर्दैमा रहेको नेपाल प्रहरीको आईजीपी बढुवा विरुद्धको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ आज हुँदै
नेपाल राष्ट्र बैंकले २६ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिल जारी गर्ने
युक्रेन आक्रमणपछि रुसी राष्ट्रपति पहिलो विदेश भ्रमणमा निस्किंदै